Babelana ngolwazi nenkcubeko – Elitsha
21st June 2016 Kholiswa TyikiEdition 6 0 Xhosa
Abantu ebebezimase eli qonga lokuchubelana nenkcubeko. Ifotwe ngu Mzi Velapi
Lo msitho, obuntsuku-mbini ubusingathwe kwithala lencwadi laseKuyasa, nalapho ubuqulathe amathandazwe, ingqanga zosiba nencwadi, izithwalandwe, imveku nabo baqingqayo ekubhaleni bonke bengungelene khona bencazelana ngamaqhinga okubuyisa isidima somntu ontsundu. Oku kwenziwa ngokubuyisela ulwimi olumnyama libe ngumanqanqa njengezinye iilwimi.
Ngokokutsho kuka Monde Kula omnye wabaququzeli balomsitho “injongo kukuphucula ihlobo lokucinga, elokwenza nelokushiya umzila ongundoqo nosisisekelo kuluntu lakuthi, utsho lokaKula. Xa ufunda ufumanisa ukuba kuninzi ongakwaziyo, kubekelaphi ke xa ungaqalisi kwa ukufunda oku. Akhonto ibuhlungu njengokugqityelwa ngenxa yokuba ungakwazi ukuzifundela, ngamanye amaxesha kuyekucingwe awukwazi kwa ukuzicingela”, waleke watsho lokaKula.
Njengoko elithala lenzelwe umntu wonke, abantwana abancinci bebengavalelwanga ngaphandle nabo kulomsitho. Bakhe baphiwa udlwabevu lwezifundo nentsomi ezibashiye betaka-taka yimincili, komnye bomakhulu abahloniphekileyo naba seleshiye umzila kwiqonga lokubhala uSindiwe Magona, noyewabethelela kanobomi kotishala ukuba bazixabise incwadi xabefundisa abantwana ukwenzela bashiye ihlumelo kwisizwe esichubekileyo.
Phakathi kwabo bebezixhwithela ngokubaluleka kolwimi bekukho uNjingalwazi Simphiwe Sesante wase Unisa nophake kwabhukuxa nemveku ngokubaluleka kokuqinisekisa ukuba asiphulukani nobuntu bethu ngoba ukuba senza njalo sakuba sisisulu sokuba yintlekisa kwizizwe.
“Ingxaki enkulu kuthi sizwe esimnyama, sithanda kakhulu ukuboleka izinto zangaphandle sizayamanise nathi, kulapho siphulukana nobuthina, ibe ibiyeyona nto ibisenza sigqame kwabanye.”
Loka Sesane, ugxile kakhulu ekubeni sihloniphe ingqondi zalapha eAfrika phambi koba siyothatha ingcebiso zoPlato nemfundiso zabo.
Nangona lomnyhadala ububanjelwe phakathi neveki abahlali badele ingqele bayophosa esivivaneni, abanye beyosenga kulombele ubhonxileyo wolwazi.
Kwabo bebezimase lomnyadala njengoMandihlume Dotwana nongumfundi kwiDyunivesithi yase Ntshona Kapa, “Esisiqalo sokuphuhlisa isizwe sethu sibeluqilima.”
Lomsitho uvaleliswe ngofundo lwencwadi kwizicaka zenkcubeko nobugcisa, omye wabo inguTshepo Nkentle nowaqala indlu yoshicelelo iLesedi House nokhe wafunda kwenye yencwadi zakhe nalapho aveze ukuba uzakuvula kungekudala umzi wokuqala wokuthengisa nokushiceleli ncwadi eMandela Park eKhayelitsha.
Also read: Sivuliwe isikhululo samapolisa
Sithe sakumcokolisa lokaNketshe ngalembono yakhe yokuzisa umzi wokushicilela nokupapasha iincwadi eKhayelitsha uphendule wathi “Okwam ayikokulandela ikhondo labanye, kodwa kukuhamba apho kungazange kwahanjwa khona. Inguqu esifuna ukuyibona kuluntu lwethu izakuza nathi xa sishukuma sizenzela ngokonokwethu kwaye sixhasane kumaphulo ethu,” ulekelise watho uNketshe.